03/10/2018 - Page 4 sur 4 -
03/10/2018 admintriatra 0
Tsy misy izay tsy mimenomenona amin’ny fahavoretrana sy loto, ary fako ao amin’ny renivohitr’i Betsimisaraka, na ny mponina ao an-toerana izany, na vahiny mandalo. Tena tsy hita intsony izay maha renivohitr’i Madagasikara ara-toekarena an’i Toamasina. …Tohiny
Kandida 8 amin’ ireo 36 sisa andrasana, dia ho feno ny isan’ireo mpitam-bolan’ny antoko. Nanamafy ny kaomisiona mpanara-maso ny volan’ny antoko, fa didian’ny lalàna izy ireo hametraka izay olona izay. Mba hanamora ny asan’ny mpitam-bola …Tohiny